Iindlela ezi-3 zoTyalo-mali oluNgcono lweNtengiso yeTekhnoloji Martech Zone
Iindlela ezi-3 zoTyalo-mali oluNgcono lweNtengiso yeTekhnoloji
NgoLwesithathu, Aprili 27, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ukubhengezwa: Iposi kunye nokunikezelwa okuxhaswe nguComcast oShishino oluNcinci, kodwa zonke izimvo zezam. Nceda ufunde ngezantsi kwesi sithuba ukuze ubhengeze.
Ekufundeni ngezithuba eziphambili kwindawo yoluntu yaseComcast, le yenyani kuthi njengearhente kunye nabaxumi bethu. Njengearhente, sinelayisensi yobuchwephesha obuninzi, kodwa siyakwazi ukusasaza iindleko (kwaye sizuze umvuzo ngokusebenzisa itekhnoloji) kubo bonke abathengi bethu.
[ibhokisi yohlobo = "impumelelo" lungelelanisa = "ulungelelwaniso" iklasi = "" ububanzi = "90%"]Vota ukunceda ukufumanisa ukuba ngubani oza kuphumelela i $ 20,000 kwi- @ Comcastbusiness I4E Contest. Vota ngoku-Meyi 13 # I4E #ad [/ ibhokisi]
Kwikota nganye, senza uphicotho lwamaqonga esiwanika ilayisensi kwaye simisela ixabiso abasizisela lona abathengi bethu. Rhoqo, siyarhoxa kwimirhumo yethu kwiiplatifomu ezinkulu ukuba aziboneleli mbuyekezo esiyifunayo.
Ngoku ka Ishishini leComcast, Isibini kwisithathu sabanini bamashishini baziva bexakekile xa kufikwa kubuchwephesha @Comcastbusiness
Le infographic evela kwiComcast ichaza 3 yeentsika eziphambili ekufuneka uzithathele ingqalelo ngaphambi kokwenza naluphi na utyalo-mali lwetekhnoloji
Isicwangciso soShishino -Ngaphambi kokuba utyale imali, yintoni injongo kunye nentengiso yakho? Ngaba itekhnoloji oyityalayo iya kuyixhasa umbono wakho?
Ukuzalisa izikhewu -Ngaphambi kokuba utyale imali, ngaba obu buchwephesha bunokukunceda ukusombulula iingxaki zakho, okanye ngaba buza kubangela ixesha elininzi kunye neentloko kunye nabasebenzi bakho?
Fumana iNgcebiso - Phambi kokuba utyale imali, ukhe wathetha nezinye iinkokheli zeshishini okanye oogxa bakho? Sisoloko sidibana nabathengi kukhetho lwabathengisi kuba siqhelene kakhulu namaqonga amaninzi kwimarike.
Ingcebiso ebalaseleyo endinokukhuthaza amashishini ukuba bayisebenzise kwaye emva koko babuyele kuyo. Uhlahlo-lwabiwo mali lweTekhnoloji luthanda ukwanda ngaphandle kolawulo ukuba awuboni ngocoselelo!
Ukwazisa: Ishishini leComcast lidibene neebhlog ezinje ngam kule nkqubo. Njengenxalenye yale nkqubo, ndifumene imbuyekezo ngexesha lam. Abandixelelanga ukuba mandithenge ntoni okanye ndithini ngayo nayiphi na imveliso ekhankanywe kule post. IComcast Business iyakholelwa ukuba abathengi ziibhlog bakhululekile ukuba benze ezabo izimvo kwaye babelane ngamagama abo. Imigaqo-nkqubo yeShishini likaComcast ihambelana neKhowudi yeenqobo zokuziphatha ze-WOMMA, Izikhokelo ze-FTC, kunye neengcebiso zokubandakanya amajelo eendaba kwezentlalo.
tags: comcastishishini comcastcontesti4eutyaloUtyalomali lobuchwephesha kwezentengisoKuxhasiweUtyalomali lobuchwepheshaUtyalomali lobuchwephesha
I-Demandbase + Dibanisa: Chonga abathathi-zigqibo kwiiAkhawunti eziJolise kuzo
Eventbrite + Teespring: Thengisa iiT-Shirts ngeTikiti zakho